Vaovao - Fampitahana ny lalan'ny famokarana amin'ny Indostrian'ny BOPET
Ny fampitahana ny làlan'ny famokarana amin'ny famokarana indostrian'ny BOPET
Amin'izao fotoana izao, misy làlana famokarana 2 samihafa eo amin'ny indostrian'ny BOPET, ny iray dia slicing, ny iray hafa dia melting mivantana.
Talohan'ny taona 2013, ny tsena dia nifototra tamin'ny fizotran'ny slice, fa aorian'ny 2013 dia nampidirina ny dingana fiompiana. Araka ny antontan'isa nataon'i Zhuo Chuang, tamin'ny faran'ny volana septambra 2019, dia 3.17 tapitrisa taonina ny isan-jaton'ny famokarana BOPET any Chine, ary ny fahafahan'ny famokarana fitaovana mikambana mivantana dia mitentina manodidina ny 30% amin'ny fitambaran'ny famokarana, ary 60 sisa Fitaovana maina no nanesorana ny% -n'ny famokarana.
fahaiza-manao(Taonina / Taona)
Ny vidin'ny fizotry ny slice dia ambany noho ny an'ny melika mivantana, sahabo ho 500 yuan isaky ny ton. Noho izany, manana tombony matanjaka eo amin'ny sehatry ny sarimihetsika ankapobeny. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa telo voalohany amin'ny indostria dia manana fitaovana fampiharana efatra, Jiangsu Xingye, Yingkou Kanghui dia mpamatsy Top 3 amin'ny indostrian'ny BOPET any Chine, ary maromaro ny fizarana tsena mahazatra amin'ny sarimihetsika mahazatra. Miaraka amin'ny famokarana an'i Ningbo Jinyuan, Fujian Baihong, Zhejiang Yongsheng ary Shuyang Genzon dia mirotsaka amin'ny indostria, ny modely fifaninanana vaovao noforonina tao amin'ny sehatry ny BOPET, fa ny tombony azo amin'ny fifaninanana vidiny dia miharihary kokoa noho ny fomba hiasa.
Samy misy ny tombony sy ny tsy fatiantoka ao anatin'ireo dingana roa ireo. Na dia tsara kokoa aza ny tombom-barotra mivantana amin'ny sehatry ny sarimihetsika ankapobeny, ny tsipika fanaovan-tsipika dia manana tombony amin'ny lafiny famokarana sy ny vokatry ny vokatra. Amin'izao fotoana izao, ny tsenan'i BOPET amin'ny tsipika famokarana mivantana dia ny tsipika famokarana sarimihetsika manify, mazàna ny vokatra sarimihetsika Thin BOPET dia matetika ampiasaina amin'ny sehatry ny fonosana ankapobeny. Ny ampahany amin'ny hatevita ihany no azo ampiasaina amin'ny sehatry ny elektronika. Na izany aza, ny tsipika famokarana ny slicing dingana dia matevina amin'ny famokarana horonantsary matevina. Ho fanampin'ny fonosana mahazatra dia azo ampiasaina amin'ny sehatry ny orinasa elektronika sy elektrika ihany koa, ny sehatry ny fananganana sy fampiharana dia betsaka, ary ny vondrona mpanjifa no matanjaka kokoa.
Miaraka amin'ny fanavaozana ny tsipika famokarana BOPET sy ny fanatsarana ny teknolojia, ny fitaovana miempo mivantana dia afaka mamokatra vokatra bebe kokoa hatrany eo ambanin'ny fikojakojana ny vidiny. Tamin'ny 2005, tamin'ny alàlan'ny fanavaozana ara-teknolojika, Fujian Baihong dia afaka mampitombo ny hatevin'ny famokarana 75 75 ka hatramin'ny 125μ. Ny fitaovana vaovao dia mbola amboarina amin'ny fotoana manaraka. Amin'izany fotoana izany dia ho afaka hamokatra vokatra miaraka amin'ny hatevin'ny 250μ sy 300μ. Ity dia dingana evolisiona amin'ny fitaovana. Ankoatr'izay, ny tsipika famokarana BOPET dia nahatratra ny fivoaran'ny leapfrog koa raha ny sakan'ny sakany: Avy amin'ny 3.2 metatra ka hatramin'ny 8.7 metatra ka 10,4 metatra. Ny tsenan'i BOPET any Sina dia ampahany amin'ny drafitra farany amin'ny 3-15 amin'ny tsipika famokarana 10,4 m, izay hamelombelona indray ny fomba vaovao amin'ny indostrian'ny BOPET any Sina.